पार्टी सभापतिको अभिव्यक्तिले झस्काएको छ: डा. कोइराला - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ पार्टी सभापतिको अभिव्यक्तिले झस्काएको छ: डा. कोइराला
Sindhu Khabar शनिबार, २०७८ साउन १६ / १९:५२
नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रिय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको भदौ १६ गते महाधिवेशन उद्घाटन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिले आफूलाई झस्काएको बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस सिन्धुपाल्चोकले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन सुनिश्चितता र भावि नेतृत्व विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै नेता डा. कोइरालाले तल्लो तहको अधिवेशन स्थगित गरेर महाधिवेशन उद्घाटन निर्धारित समयमै गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिंदा आफू झस्किएको बताएका हुन् । उनले देउवाको अभिव्यक्तिले कतै पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन पनि तरुण दलको महाधिवेशन जस्तो हुने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको बताए ।
तरुण दलको पनि महाधिवेशन उद्घाटन भयो त्यो महाधिवेशनले तीन जना पदाधिकारी मात्र चयन ग¥यो , डा. कोइरालाले भने, अहिले पदावधी सकिंदा समेत तरुण दलमा तीन जना मात्र पदाधिकारी छन्, पार्टीको महाधिवेशन पनि त्यस्तै हुने त होइन ?
पार्टीको विधानमै नभएको पदाधिकारी र पुर्व पदाधिकारी वैठकले कुनै निस्कर्ष निकाल्न नसकेको सन्दर्भ दोहो¥याउँदै डा. कोइरालाले पार्टीका सोझा कार्यकर्तालाई भुलभुलैयामा नराख्न नेतृत्वसँग आग्रह गरे । महाधिवेशनको विभिन्न बिकल्पको छलफलले पार्टीलाई कमजोर बनाउने उनको चिन्ता थियो । राजनीतिक दलका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परिरहेको सन्दर्भ औंल्याउँदै कोइरालाले काँग्रेसमा त्यस्तो अबस्था आउन नदिन नेतृत्व बेलैमा सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे ।
पार्टी महाधिवेशन युवा कार्यकर्ताको भविश्यसँग जोडिएकाले सबै समस्या समाधान गरेर मिति निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पार्टी महाधिवेशन समयमै गरेर कुशल नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अर्का केन्द्रिय सदस्य विष्णुबिक्रम थापाले पार्टी अनुशासनलाई कायम राख्दै जिम्मेवार कार्यकर्तालाई सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने भनाई राखेका थिए ।